किन विस्तार हुन सकेन मिनरल वाटर आयोजना ? – Dcnepal
किन विस्तार हुन सकेन मिनरल वाटर आयोजना ?
प्रकाशित : २०७६ मंसिर २ गते १३:४९
काठमाडाैं। पनौतीस्थित ‘मिनरल वाटर’ आयोजनाबाट उत्पादित पानीको बजारमा माग धेरै भए पनि त्यसअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। जग्गाको अभावकै कारण आयोजनाले क्षमताभन्दा ज्यादै कम परिणाममा पानी बजारमा आपूर्ति हुने गरेको छ।
सरकारीस्तरबाट पानी बिक्री–वितरण गर्ने पहिलो आयोजना भए पनि यसलाई विस्तार गर्न नसकिएको नेपाल खानेपानी संस्थानले जनाएको छ। नगरपालिकाले सो आयोजनाका लागि झण्डै सात रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा दिएकामा अहिले कार्यालय सात आनामा सीमित छ। आयोजनाको जग्गामा अतिक्रमण गरेर सुकुम्बासीले घरलगायत संरचना बनाउँदा आयोजना खुम्चिएको हो।
संस्थानका महानिर्देशक डा भूपेन्द्र प्रसादले सो स्थानमा खुम्चेको जग्गा फैलाएर क्षमतानुसार उत्पादन गर्ने योजना रहेको बताए। यससँगै अन्य स्थानमा रहेका पानीका स्रोतको अध्ययन गर्दै जाने संस्थानको योजना छ। सगरमाथाबाट आएको पानी मिनरल वाटर र जारमार्फत बिक्री–वितरणका लागि अध्ययन गर्ने योजना संस्थानको छ।
महानिर्देशक प्रसादको नेतृत्वको टोली केही दिनमै त्यसतर्फ जानेछ। संस्थानले देशभित्र मात्रै नभएर विदेशमा समेत पानी बिक्री–वितरण गर्ने योजना बनाइरहेको उनले बताए। उनले भने, “विज्ञ सम्मेलित टोली गएर स्थलगत निरीक्षण गरेपछि नै थप अध्ययन अघि बढ्नेछ।”
नेपाल खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष जीउलाल चौधरीले कर्मचारीले जाँगरका साथ काम गर्दा मात्रै संस्थानका कुनै पनि योजना सफल हुन सक्ने बताए। ‘मिनिरल वाटर’ आयोजना विस्तार गर्दै जाने संस्थानको योजना छ। उनले भने, “संस्थान रहेमात्रै हामी रहन्छौँ भन्ने कर्मचारीले सोच्नुपर्छ।”
पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपानेले आयोजनाको क्षमता विस्तारका लागि पहिलो काम नक्सानुसार जग्गा कायम गर्नु नै भएको बताए। सो स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी संस्थानको जग्गा फर्काउनुपर्ने उनले बताए। त्यस स्थानमा बसोबास गर्नेमध्ये को वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र को होइनन् भनी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
संस्थानले कुनै पनि आयोजना सञ्चालन भएका स्थानमा स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गर्न सकेको छैन। नगरपालिकामै रहेको एकीकृत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन लाग्दासमेत समन्वय नभएको उनले बताए। उनले भने, “आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिए पनि समन्वय भइरहेको छैन।”
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले संस्थानले खानेपानीको नयाँनयाँ स्रोतको खोजी गर्दै जानुपर्ने बताइन्। शहरी क्षेत्रमा ‘मिनरल वाटर’ र जारको पानी आवश्यक रहेको छ। संस्थानले पानीको उत्पादन गर्दै बजारमा मागको अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। अहिले धेरै स्थानमा पानीको माग भइरहे पनि दिन आपूर्ति गर्न नसकिएको संस्थानले जनाएको छ । एक लिटर पानीको बोतल बजारमा माग उच्च रहेकाले उत्पादनका लागि स्वचालित उपकरण जडान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
जग्गा खुम्चिएकै कारण आयोजनाको क्षमता बढाउन कठिन भएको पनौतीस्थित कार्यालय प्रमुख पुष्पाञ्जलि विष्टले बताउनुभयो । अहिले जारको पानी मात्रै उत्पादन हुने गरेकामा ‘मिनरल वाटर’समेत बजारमा पु¥याउन सकिने उहाँले सम्भावना रहेको बताउँदै उनले भनिन्, “अहिले सानो प्लान्टका रुपमा रहेकामा यसलाई विस्तार गर्न सक्दामात्रै हामी नाफामा जानेछौँ।”
विसं २०६७/६८ मा अध्ययन भएर विसं २०७४/७५ मा सञ्चालनमा आएको सो आयोजनाको क्षमता दैनिक एक हजार २०० जार रहेको छ। हाल सो आयोजनाबाट दैनिक २६५ जार उत्पादन भइरहेको छ । पानी परीक्षण प्रयोगशालामा दैनिक परीक्षणपछि मात्रै पानी वितरण हुने गरेको छ । सो स्थानमा पानी वितरणको क्षमता प्रतिघण्टा दुई हजार लिटर रहेको छ।
बजारमा जार तथा बोतलको पानीको मागलाई सम्बोधन गर्नेसँगै आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधारका संस्थानले प्रशोधित पानी बिक्री–वितरणको नमूनाका रुपमा पनौतीमा शुरु गरेको थियो। अहिले खानेपानी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पानी वितरण हुँदै आएको छ भने आगामी दिनमा अन्य मन्त्रालय र स्थानमा समेत फैलाउने लक्ष्य लिइएको छ।